Kooxda Atletico Madrid oo Real Madrid Ka Reebtay Koobka Copa Del Rey “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Atletico Madrid oo Real Madrid Ka Reebtay Koobka Copa Del Rey “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid ayaa garoonkeeda Santiago Bernabeu uga hartay koobka boqortooyada ee Copa Del Rey,ka dib markii lugtii labaad ay barbardhac 2-2 ah ku kala baxeen kooxda ay ka wada dhisanyihiin caasimada Madrid ee Atletico Madrid.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa inta aysan bilaaban ciyaarta taageerayaasha kooxda Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu ugu soo bandhigay abaal marinta FIFA Ballon D’or oo uu habiinkii isniinta ku soo guuleystay.
Kooxda Atletico Madrid ayaa lugtii koowaad garoonkeeda Vicente Calderón Stadium 2-0 uga soo badisay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Fernando Torres oo dhawaan si amaah ah ugu soo biiray kooxda Atletico Madrid ayaa daqiiqadii koowaad ee ciyaarta goolka koowaad u dhaliyay kooxdiisa cusub.
Ciyaaryahan Sergio Ramos ayaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Real Madrid,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta oo gacan sareysay kooxda Real Madrid.
Kooxda Real Madrid oo looga baahnaa in ay qeybtii danbe ee ciyaarta dhaliso sedax gool si ay ugu soo baxdo quarter finalka koobka Copa Del Rey ayaa waxaa hadane bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool labaad kaga naxsaday ciyaaryahan Fernando Torres.
Kooxda Real Madrid ayaa xaaladu ku xumaatay,waxaana hadane looga baahday afar gool si ay u soo baxdo.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii 54-aad ee ciyaarta gool labaad oo barbardhac ah u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Kooxda Atletico Madrid oo uu hogaamiyo macalin Diego Simeone ayaa isku cel celis ahaan 4-2 uga ugu soo baxday quarter Finalka koobka Copa Del Rey.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaamiyo macalin Carlo Ancelotti ayaa ka hartay koobka Copa Del Rey oo ay daafacaneysay.
Safiirka Imaaraadka Ee Soomaaliya Oo Booqday Magaalada Garoowe “SAWIRRO”